Tohin'ny hafanana anaty
2007-05-04 @ 07:47 in Politika
Dia mitohy indray ity vaovao ity ary ampitaina araka izay tratra hatrany. Ny tena anton’ny rehetra moa dia ny fanakaikezan’ny daty malaza 13 mey (izay nitontona alahady tamin’ity taona ity fa tsy zoma izay misy heviny hafa mihitsy ihany koa moa). Na izany na tsy izany dia isaorana hatrany ny mpampita vaovao rehetra sy ireo mpilaza ny heviny amin’ny haino aman-jery ahafahana mampiseho ny fomba fitenenan’ny Ntaolo ho mbola marina manao hoe : « Ny hevitry ny maro mahataka-davitra ».
Boriziny : Lesona ho an’ireo tompo-menakely mitady hanjakazaka any amin’ny faritra any mba tsy hanaonao foana fa olona misaina ny malagasy. Amin’ny ankapobeny manko dia manjary amin’ny alalan’ny herisetra no anehoan’ny olona lavitra ny foibe ny heviny mba hitodihan’ny mpitondra any aminy.
Toliary : Ambara matetika amin’ny radio hatrany ny tenin’ny mpitondra any amin’ny faritra na distrika miangavy ireo izay nandositra niala tany an-tanàna fa efa milamina ny any an-tanàna amin’izao fotoana izao.
Mpiantso iray kosa no nanambara fa tsy mbola tena miverina amin’ny laoniny ny toe-draharaha any na dia mihamilamindamina hatrany aza. Nitantara ary izy (filazan’olona niantso ity ka azonao inoana na tsia) fa tamin’ny fotoana tsy namakian’ny olona ny an’ny karana sy ny an’ny filoha Ravalomanana (magro) dia tsara ambina ireo toerana ireo ary tena miasa ny mpiaro ny toerana. Ny an’ny olona hafa kosa dia efa nilaza ny hiaro ny « tompon-tanàna » mba tsy hisy handroba ny entan’ny mpifanolo vodirindrina aminy. Tonga anefa ny mpitondro filaminana avy ao an-toerana hilaza hiaro ny toerana ka dia natoky ireo olona milaza hiambina ny toerana ary dia niala ny fiambenana.
Kanjo, rehefa tonga ny mpandroba dia nijery fotsiny no nataon’ireo polisy avy ao an-toerana ireo. Tsy nivonona ny hiaro mihitsy izy ireo. Samy nahatsiaro ho voafitaka na ny tompon’ny toerana fivarotana na ny mponina niambina natoky ireo mpitandro ny filaminana nijery sinema ireo fotsiny.Mpitandro ny filaminana misahana manokana momba ny hotakotaka avy taty an-toerana (G6) no tena nandray andraikitra vao tsy sahy mikitikitika loatra ireo mpanararaotra.
Sambava : Nanana ny akony tamin’ny mpamaky gazety maromaro ny tenina mpitarika politika tany amin’ity toerana ity manery ny merina (dia lasa miverimberina moa ity teny ity na dia heverina ho fankahalana aza na dia ny manonona io teny io fotsiny aza) hanaraka ny heviny sy hiaraka aminy fa raha tsy izany dia tokony hody any amin’ny misy azy any.
Ny fanaon’ny olona amin’ny ankapobeny rehefa any amin’ny faritra hafa izy dia miala amin’ny adi-hevitra politika mety hampisara-bazana araka ny mahazatra moa. Samy manana ny heviny manko nefa mbola be loatra ny tsy mahazaka ny hevitry ny olona tsy mitovy amin’ny azy. Noho izany dia tsy ho hita loatra amin’ny fanohanana an’izatsy na izaroa ny olo-tsotra na dia manana ny heviny aza. Ity nataona mpitarika politika ity kosa dia ny manery ny olona hiaraka hivory hiaraka aminy fa raha tsy izany…(efa voasoratra kosa e !). Heverina avy hatrany manko fa rehefa tsy mety hiaraka amin-dry zareo dia tena mpiray petsapetsa amin’ny mpitondra izay. Nanasaro-draharaha ny fihetsika sahala amin’izany.